လူမှုပဋိပက္ခ - လူမှုရေးပဋိပက္ခနှင့်၎င်း၏အမျိုးအစားများကိုကားအဘယ်သို့
လူမှုပဋိပက္ခ - အကြောင်းရင်းများနှင့်သူတို့ကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေ
လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေအနေတစ်ခုမှာကွဲပြားခြားနားသောအုပ်စုများ၏ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံ, အပိုပိုမိုရှုပ်ထွေးကြောင့်စိတ်စိတ်အမွှာမွှာနှင့်လူမှုရေးပဋိပက္ခကဲ့သို့သောဖြစ်ရပ်များ၏ဖြစ်ပျက်မှုများ၏အန္တရာယ်ကြီးမြတ်တော်မူ၏။ သူ့ကိုမှကျေးဇူးတင်ပါသည်များနှင့်တစ်ဖွဲ့လုံးကလူသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပါပဲ။
ဒါဟာတစ်ဦးချင်းစီ, အုပ်စုများသည်မြေတပြင်လုံးလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့မြေတပြင်လုံးအကြားဆက်ဆံရေးအတွက်ဖွံ့ဖြိုးဆဲထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုထားတဲ့အတွက်အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကဖြစ်ပါတယ်။ လူမှုရေးပဋိပက္ခ၏အယူအဆနှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောပါတီများ၏ဆန့်ကျင်သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားဆန့်ကျင်ကြောင်းလိုအပ်ချက်များနှင့်အကျိုးစီးပွားရှိပါတယ်အခါ, ခွဲခြားနှင့် intrapersonal ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှု။ ဤပြဿနာကိုတစ်ခုထက် ပို. နှစ်တထောင်ရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်အခြားသူတွေကိုနာခံရစဉ်တစျခု, "အုပ်" သူဖြစ်ရမည်သောအနေအထားအပေါ်အခြေခံသည်။
အဆိုပါဖောင်ဒေးရှင်းဝိရောဓိပုဂ္ဂလဒိဋ္-ရည်မှန်းချက်သဘာဝဖြစ်ပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာဝိရောဓိ "ဘိုးဘေးတို့၏" နှင့် "ကလေးတွေ", အထက်လူကြီးနှင့်လက်အောက်ငယ်သား, အလုပ်သမားများနှင့်မြို့တော်အကြားထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုများပါဝင်သည်။ လူမှုရေးပဋိပက္ခ၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္အကြောင်းတရားများဟာတစ်ဦးချင်းစီတဦးချင်း၏အခြေအနေနှင့်ကသူ၏ဆကျဆံရေးများ၏အမြင်အပေါ်မူတည်ပါသည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များ conflictologists ဤအဓိကဖြစ်ကြောင်း, ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုများပေါ်ပေါက်ရေးတို့အတွက်အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုး secrete:
သီးခြားစီယူ, တစ်ဦးချင်းစီနှင့်အုပ်စုများစသည်တို့ကိုကြောင့်စည်းစိမ်ဥစ္စာ, မူလတန်းသဘောထားများနှင့်တန်ဖိုးများကို, အာဏာနှင့်အခွင့်အာဏာမှဆန့်ကျင်စေခြင်းငှါ လှုပ်ရှားမှုတစ်စုံတစ်ရာလယ်ပြင်၌မတူညီသောလိုအပ်ချက်များနှင့်အကျိုးစီးပွားအပေါ်အငြင်းပွားမှုဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်အားလုံးပဋိပက္ခများကိုတစ်ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုသို့မြင့်လာဘူး။ သာတက်ကြွစွာဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းများနှင့်ပွင့်လင်းရုန်းကန်အတူကအကြောင်းပြောဆိုရန်။
လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံးကခြံစည်းရိုး၏နှစ်ဖက်စလုံးတွင်ရပ်နေသောလူဦးဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့သူတို့နှစ်ဦးစလုံးရုပ်ပိုင်းနှင့်ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းများရှိနိုင်ပါသည်။ လူမှုရေးပဋိပက္ခ၏အင်္ဂါရပ်များရာကိုလည်းသင်တန်းသားများ၏အကျိုးစီးပွားရင်ဆိုင်ရကြောင့်, အချို့ကွဲပြားမှုအပေါ်အခြေခံကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးပစ္စည်း, ဝိညာဉ်ရေးရာသို့မဟုတ်လူမှုရေးပုံစံရှိသည်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီပါဝင်သူရရှိရန်ရှာကြံအကြောင်းတစ်ခုအရာဝတ္ထုလည်းရှိပါသည်။ တစ်ဦးကတိုက်ရိုက်မိမိတို့၏ပတ်ဝန်းကျင်သည် micro သို့မဟုတ်နိုင်တဲ့ macro ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်။
လူမှုပဋိပက္ခ - အကောင်းအဆိုး cons
တဖကျတှငျပွင့်လင်းထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုလူ့အဖွဲ့အစည်းအချို့သဘောတူညီချက်များနှင့်နားလည်မှုအောင်မြင်ရန်, တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲခွင့်ပြုပါတယ်။ ရလဒ်အနေနဲ့က၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်အချို့အကောင့်သို့ကအခြားတစ်ဦးချင်းစီ၏ဆန္ဒကိုယူပြီး, ကျွမ်းတဝင်မရှိသောအခြေအနေများလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့သင်ယူနေကြသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဒီနေ့ရဲ့လူမှုရေးပဋိပက္ခများကိုနှင့်၎င်းတို့၏အကျိုးဆက်များခန့်မှန်းရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့အဆိုးဆုံးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အမှု၌လုံးဝဖြစ်ရပ်များပြိုကျနိုင်ပါတယ်။
ဒီဇိုင်း, ဒုတိယ - - ပထမအဖျက်။ အပြုသဘောဆောင်တဲ့အပြုသဘောများမှာ - လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းကိုဖကျြဆီး, တင်းမာမှုများရေပိုင်နက်ပြဿနာဖြေရှင်းရန်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းအပြောင်းအလဲများကိုလုပ်ဆောင်သွားရန်နှင့်အခြားအဖျက်အဗဒ္ဒုန်နှင့်ပရမ်းပတာဖြစ်ကြသူတို့တစ်တွေအထူးသဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ဆက်ဆံရေးမတည်မငြိမ်ဖြစ်စေတယ် .. လူမှုရေးပဋိပက္ခ၏တစ်ဦးအပြုသဘောအင်္ဂါရပ်တစ်ခုလုံးအဖြစ်လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်ယင်း၏အဖွဲ့ဝင်အကြားဆက်ဆံရေးခိုင်မာစေရန်ဖြစ်ပါသည်။ အနုတ်လက္ခဏာ - လူ့အဖွဲ့အစည်း destabilizes ။
hidden ။ အဖွဲ့အစည်းများအကြားဆက်သွယ်ရေးအတွက်တင်းမာမှုကြောင့်အ၎င်းတို့၏အနေအထားကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်နှင့်ထူးချွန်အောင်မြင်ရန်တစ်ဦးချင်းစီ၏အလိုဆန္ဒ၏ကြီးထွားလာနေပါတယ်။
ဗို့အား။ အခြေခံပညာခြေလှမ်းများတင်းမာမှုလူမှုရေးပဋိပက္ခပါဝင်သည်။ ထိုအခါကြီးစိုးလက်၏တန်ခိုးနှင့်သာလွန်ပိုသည်ပိုမိုအားကောင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖျက်သိမ်းနှစ်ဖက်ဟာအလွန်အားကောင်းတဲ့ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုစေပါတယ်။
ပြီးစီး။ အခြေအနေကို resolution ။
သူတို့ဟာစသည်တို့ကိုလုပ်အား, စီးပွားရေး, နိုင်ငံရေး, ပညာရေး, လူမှုဖူလုံရေး, နိုင်ပါတယ် ပြီးသားဖေါ်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း, တစ်ဦးချင်းစီနှင့်တစ်ဦးချင်းစီအတွင်းမှာအကြားဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ တစ်ဘုံခွဲခြားင်:
တန်ဖိုးများကို, အကျိုးစီးပွားနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာများ၏ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှု - များ၏အရင်းအမြစ်အရသိရသည်။
ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှု၏ဒီဂရီ - ရေတို, အလတ်, တာရှည်, ချွန်ထက်, အကြီးစား, ဒေသဆိုင်ရာဒေသခံများနှင့်အခြားသူများကို။
အလျားလိုက်နှင့်ဒေါင်လိုက် - ပြိုင်ဘက်၏တည်နေရာနှင့်အညီ။ တူညီသောအဆင့်တွင်ရပ်နေသောလူဦးငြင်းခုံပထမဦးဆုံးအမှု၌၎င်း, ဒုတိယသာလွန်နှင့်လက်အောက်၌တည်၏။
ငြိမ်းချမ်းသောနှင့်လက်နက်ကိုင် - ရုန်းကန်၏နည်းလမ်းအရသိရသည်။
လျှို့ဝှက်ခြင်းနှင့်ပေးခြင်း - ပွင့်လင်း၏ဒီဂရီပေါ် မူတည်. ။ ပထမဦးဆုံးအမှု၌ပြိုင်ဘက်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားသွယ်ဝိုက်နည်းလမ်းများထိခိုက်စေ, ဒုတိယ pass အတွက်စကားများရန်ဖြစ်နှင့်အငြင်းပွားမှုများဖွင့်လှစ်ရန်။
အဖွဲ့အစည်းက, အုပ်စုတစု, နိုင်ငံရေး - သင်တန်းသားများ၏ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်အညီ။
ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုကိုရှောင်ရှား။ သောအဖွဲ့ဝင်တဦးတည်းကို "မြင်ကွင်းတစ်ခု" ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရွက်, ဒါပေမယ့်သူကသူ့ရဲ့ကျောက်ဆောင်များ၏အကြောင်းတရားများဖယ်ရှားပစ်မထားဘူးအဖြစ်ပဋိပက္ခအခွအေနေဖြစ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
အကျိုးဆောင်။ လူမှုရေးပဋိပက္ခများကိုဖြေရှင်းနည်းများ ကြားခံများ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုများပါဝင်သည်။ ဒါဟာအခွင့်အလမ်းများနှင့်လုပ်နေတာ၏အတှေ့အကွုံမှကျေးဇူးတင်စကားသူ့ကိုမပါဘဲလုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်တာပါလိမ့်မယ်အရာ, အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ်အခန်းကဏ္ဍအဖြစ်ပုဂ္ဂလိကလူတစ်ဦး play လိမ့်မည်။
စင်လုပ်ရန်။ တကယ်တော့တစ်ဦးအချိန်တွင်ပြိုင်ဘက်များထဲမှ၎င်း၏လမ်းဆုံးရှုံးသည်ပျောက်ဆုံးပြန်လည်ဖို့ကြိုးစားနေ, လူမှုပဋိပက္ခအစွမ်းသတ္တိကိုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် re-ဝင်လိုသော။
ခုံသမာဓိသို့မဟုတ်ခုံသမာဓိခုံရုံးကိုကုစား။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အတိုက်အခံဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီနားလည်သည်။
စစ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်လက်နက်များပါဝင်သော Force, အကြောင်း, တကယ်တော့တစ်ဦးစစ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။
သိပ္ပံပညာရှင်များ functionalist နှင့်ရှုထောလူမှုဗေဒဆိုင်ရာအချက်ဤဖြစ်ရပ်ဆန်းစဉ်းစားပါ။ ပထမဦးဆုံးအမှု၌, ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုရှင်းလင်းစွာအနုတ်လက္ခဏာရှိပြီးကဲ့သို့သောအကျိုးဆက်များမှဦးဆောင်:
လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့တည်မငြိမ်ဖြစ်စေ။ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းထိန်းချုပ်မှုမရှိတော့အလုပ်, ပရမ်းပတာနဲ့ခန့်မှန်းရခက်။
လူမှုရေးပဋိပက္ခ၏အကျိုးဆက်များကတော့ပါဝင်သည် အာရုံစူးစိုက်မှု ရနျသူကိုကျော်အောင်ခြင်းအတွက်ပါဝင်သည်ဟုတစ်ဦးအထူးသဖြင့်ရည်ရွယ်ချက်မှာပါဝင်သူ၏။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အပေါငျးတို့သညျအခွားပြဿနာများနောက်ခံသို့လည်းညှိုးနွမ်း။
လက်ရှိနောက်ဆုံးရေးသားချိန်နှင့်အသစ်အဆောက်အဦများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ အသစ်ပေါ်ထွက်လာအုပ်စုများအတွက်ဆွေမျိုးတည်ငြိမ်ရေးကိုအာမခံထားတဲ့အကျိုးစီးပွားတစ်ဦးချိန်ခွင်လျှာ, ဖန်တီးပေးပါတယ်။
စီမံခန့်ခွဲပဋိပက္ခထပ်မံသင်တန်းသားများကိုအားပေးထား၏။ သူတို့ကဖြစ်ပါတယ် "ဟုကြီးထွား" နှင့်ဖွံ့ဖြိုးအသစ်အတွေးအခေါ်များနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်။
တစ်ဦးဓာတ်ပုံပြပွဲမှတ်ဉာဏ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဘယ်လို - အထိရောက်ဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်နည်းပညာများကို
လောက Humanitarian သည် - ဘာသာရေးနှိုင်းယှဉ်အလားအလာ
Hangouts ကို - ဤအစီအစဉ်နှင့်မည်သို့အသုံးပြုသည်အဘယ်နည်း
ယင်ကောင်-အမျိုးသမီး၏ system ကို
အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှု - အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှု
နယူးအစားအသောက်များတွင် - နှစ်သစ်ကူးရဲ့စားပွဲပေါ်တွင်အစားအသောက်ဟင်းလျာများ
Kendall Jenner ပွဲမှာချစ်မြတ်နိုးတဲ့ Blake က Griffin ထောက်ခံ
Milla Jovovich နှင့်သူမ၏သမီးဘာလင်ပြပွဲမာ့ခ်ကာဣနတက်ရောက်ခဲ့သည်
ရေချိုးခန်းနှင့်အတူ Loggia အခန်းထဲမှာ
တိုင်းပြည်အတွင်းတစ်ဦးကမင်္ဂလာဆောင် - မှတ်ပုံတင်ရေး
စားဆင်ယင်မှု၏ဘာသာစကား Venetian စတိုင်
Semifredo - စာရွက်
Samet ကျွန်း, ထိုင်း
အထီး Scorpio - ဘယ်လိုအနိုင်ရနှင့်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့?